Ihe omuma ihe omuma bu isi ihe di iche iche iji jiri Crawlers Web
Crawlers saịtị bụ bọtịnụ a kapịrị ọnụ nke pụrụ iche, nke na-eme ka ebe nrụọrụ weebụ gị dajụọna ndokwa ya na engines ọchụchọ maka visibiliti. N'ọnọdụ ụfọdụ, anyị na-etinye ọdịnaya n'ime ọdịnaya weebụ anyị na ụzọ ndị crawlers ndị a na-adaịchọta. Ozi ọ bụla, nke na-enweghị ike ịchọta ya site na crawlers weebụ na-adịghịkarị index Google. N'ihi ya, ọ bụghị gịihe dị mkpa n'agbanyeghị na ị na-eme mgbalị SEO gị. Ihe omuma a bu uzo ntanet nke ndi mmadu na-eme mgbe ha na-acho igbasaa weebụsaịtị ha - ubiquiti yagi.Dị ka a rụpụtara, ọ dị mkpa ijiri crawlers na saịtị gị iji mee mgbanwe nhazi ma dozie njehie, nke nwere ike belata ogo gị.
Onye ọkachamara Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, Jack Miller na-akọwa akụkụ dị mkpa nke iji crawlers maka ebe nrụọrụ weebụ gị.
Mkpa Dị Iji Iji Crawlers
Ndị na-egwu ụgbọ mmiri nwere ike igosi gị ihe ndị na-ege ntị hụrụ. Dị ka ọtụtụ ndị ọchụnta ego na-eme weebụsaịtịma tinye ọdịnaya, ha na-eche na ndị na-azụ ahịa ha ga-ahụ ya nke ọma, ichefu ihe ndị ọzọ nwere ike ime ka ọ ghara ime.Nke a bụ ọnọdụ ebe ndị ntanetị weebụ na-abata. Web crawlers na-abanye n'ebe kachasị ezo na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ha nwere ike igosi gị na ị na-efuozi ngwaahịa yana ọtụtụ njehie dị na usoro nlekọta ọdịnaya gị.
1. Ịchọpụta arụmọrụ arụmọrụ
Otu n'ime akụkụ dị mkpa nke SEO na-enyocha ọganihu nke ibe ọ bụla. Weebụndị na-awagharị crawlers nwere ike ịchọta nchịkọta na metrics nke sitere na isi mmalite ndị dịka Google Analytics na Google Search Console. Ha nwekwara ike inyere akaị nyochaa arụmọrụ nke ibe dị iche, na-enye gị nghọta bara uru iji dezie ozi gị maka ịrụ ọrụ SEO kasị mma..
2. Idozi njehie nke ụlọ ọrụ
Otu n'ime ihe ndị nwere ike belata ọrụ SEO bụ nsogbu gbasara saịtị gịọsọ na nzaghachi. Na-agba ọsọ ngwa ngwa ngwa ngwa na-alọta koodu nzaghachi siri ike maka URL ọ bụla na saịtị gị. Njehie na redirects nwere ike idozingwa ngwa jiri ụfọdụ n'ime ihe nzacha ha dị ka njehie 404 nzacha. Ha nwekwara ike ịnye gị ozi gbasara njikọ redirect gị dị iche icheebe ha na-eziga ozi ha.
3. Ndị Crawlers nwere ike ịchọpụta ọdịnaya
Ndị na-egwu ụgbọ mmiri nwere ike ịchọta iwu "enweghị ndetu". Ndị a bụ ebe na ebe nrụọrụ weebụ gị ebe botsenweghị ike iru. N'iji ozi a, ị nwere ike ime mgbanwe ndị dị mkpa na nhazi njikwa ọdịnaya gị na index niile ọdịnaya gị.Nchịkọta ngwaahịa na otu dị na igbe nlele na-efu enweghị ike ịnweta mmelite na nchekwa data gị.
4. Ịchọpụta na idozi ihe odide abụọ
Na ngwa ndị ọzọ, ndị ọrụ crawlers nwere ike ịnweta ọdịnaya abụọ. Data a bụ ọdịnayanke gosiputara na otutu njikọ na engines ọchụchọ. Ihe dị otú ahụ dị njọ maka SEO gị ma na-emecha kwụsị ikike nke weebụ gịpeeji nke. Ndị na-egwuru egwu nwere ike inyere gị aka ịchọta ụdị ibe ndị a ma nyere gị aka idozi ha site na redirects 301.
Ndị ọrụ crawlers saịtị nwere ike ịchọpụta ihe dị iche iche zoro ezo na saịtị gị nke nwere ike imetụtasaịtị gị n'amaghị ama. SEO bụ usoro mgbagwoju anya, nke na - agụnye ọ bụghị nanị nyochaa kwesịrị ekwesị na ịgbaso ihe ọmụma ndị a,ma na-emelite mgbe niile nke ọdịnaya gị. Ụfọdụ ndị na-ahụ maka crawlers weebụ ndị ọzọ dị ka Flying Frog's SEO Spider ma ọ bụ Ọkachamara nchịkọta na-eme dịka ndị crawlers search engine. Ha nwere ike inye gị ozi bara uru, nke nwere ike inye aka n'ime mgbanwe ndị dị mkpaọdịnaya weebụ gị iji nweta ọkwa dị elu n'usoro ajụjụ ọchụchọ anụ ahụ.